विमानको रङ प्रायः किन सेतो हुन्छ ? यस्ता छन् वैज्ञानिक कारण « रिपोर्टर्स नेपाल
विमानको रङ प्रायः किन सेतो हुन्छ ? यस्ता छन् वैज्ञानिक कारण
एजेन्सी । तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ विमानको रङ प्रायःजसो सेतो किन हुन्छ ? यसको वैज्ञानिक र आर्थिक दुवै कारण छन् ।
पहिलो कारण त तातोबाट जोगिन हो । रनवे देखि उड्दासम्म अधिकतम समय विमान घाममा रहन्छ । यसमा सुर्यको इन्फ्रारेड किरण सिधै पर्छ । सेतो रङले सुर्यको किरणलाई रिफलेक्ट गरिदिन्छ । जसबाट विमान तातो हुँदैन र भित्र तापमान नियन्त्रित रहन्छ ।
अर्को कारण, विमानको बडी पार्ट सेतो रङको भए टाढैबाट सजिलै देख्न सकिन्छ । तर अन्य रङमा भने राम्रोसँग देख्न सकिदैन् ।
सेतो रङमा भिजिविलिटी अर्थात दु्श्यता अन्य रगको तुलनामा धेरै हुन्छ । यो रगलाई अन्धकारमा पनि सजिलै देख्न सकिन्छ । यसको साथै धेरै समय घाममा रहँदा अन्य रगहरु छिटै बिग्रने हुन्छ । जबकी सेतो रगमा लामो समयसम्म टिकीरहन्छ । यसले गर्दा पटक–पटक लाग्ने खर्च पनि बचाउँछ ।
२०११ को ह्युमन वाइल्डलाइफ इन्टरेक्शनमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार सेतो रगबाट पक्षीहरु पनि टाढा भाग्छन् । अध्ययनबाट गहिरो र हल्का नीलो रगको विमानको रगबाट भन्दा सेतो रगको विमानमा चराहरुको घटना कम हुन्छन् । पक्षीले सेतो रगको विमानलाई सजिलै अन्दाज लगाउन सक्ने भएकोले आवश्यकता अनुसार आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्न सक्छन् ।
इजरायलमा २१ सय वर्ष पुरानो हेलेनेस्टिक फार्म फेला
एजेन्सी, १४ मङ्सिर। इजरायलका पुरातत्वविद्हरुले करिब २१ सय ५० वर्ष पुरानो हेलेनिस्टिक फार्म फेला पारेका
के तपाईलाई मानिसहरूले मन पराउँदैनन्
कसैले तपाईलाई अस्वीकार गर्यो वा तपाईलाई माया गरेपनि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्। कसैले तपाईलाई चाहेको
बच्चा जन्माउन साइकल चढेर अस्पताल पुगिन विधायिका
काठमाडौं, मंसिर १३ । न्युजिल्यान्डका विधायिका जुली एन्ने गेनटर बच्चा जन्माउन आफैं साइकल चलाएर अस्पताल
आँगनबाट चितुवाले छोरीलाई लगेपछि एक्लै लडेर बचाए यी बाबुले
एजेन्सी, ७ मंसिर । नाम सुन्दा पनि डर लाग्ने जनावर हो–चितुवा । आफ्नो छोरीलाई चितुवाले
पेरुमा प्राचीन समयको सामूहिक चिहान भेटियो
एजेन्सी, २७ कात्तिक। पुरातत्वविद्हरुले पेरुको च्यान च्यान सहरमा प्राचीन समयको सामूहिक चिहान फेला पारेका छन्।
सबैभन्दा कम समयमा जन्मिएको शिशु
काठमाडौं, कार्तिक २६ । आमाको गर्भमा केवल २१ साता र एक दिन रहेर अमेरिकामा जन्मिएका
३ करोड रुपैयाँ मूल्यको थोत्रो भलिबल
एजेन्सी, २५ कात्तिक । यो थोत्रो भलिबल हो । माथिपट्टि भवाङ परेको यो भलिबल लिलामीमा
विहेको भोज खान हिडेका तीन जनाको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु
कञ्चनपुर, मंसिर १८ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित झलारीमा ट्याक्टर दुर्घटनाबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।